Omume nzukọ 4 dị n'ịntanetị iji were n'ụlọ ọrụ
4 Omume nzukọ ọgbakọ dị n'ịntanetị iji were n'ọfịs
Ebe E Si Nweta: Tọgharia
Ọrịa COVID-19 wetara mgbanwe na modus operandi nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na azụmaahịa.
Otu n'ime mgbanwe ndị a bụ ngbanwe site na nzukọ ihu na ihu nke bụbu pre-COVID-19, gaa nzukọ n'ịntanetị.
Agbanyeghị, ka ụlọ ọrụ ji nwayọọ nwayọọ maliteghachi ọrụ anụ ahụ, a na -ewepụ ihe ndị a na -enwe na nzukọ ịntanetị, ọkachasị n'ihe gbasara mmekọrịta na ụkpụrụ, nke anyị chere na ha kwesịrị idobe iji meziwanye arụmọrụ ma kwalite gburugburu ọrụ ọrụ.
Soro ndị mmadụ akpakọrịta tupu nzukọ
Onye ọ bụla na -anọ n'isi ụtụtụ na nzukọ ịntanetị ga -agba akaebe na a na -agbachikarị nkịtị n'oge mbido mgbe onye ọ bụla na -agbalị ịbanye ma hụ na igwe okwu ha dị n'usoro. Otu ihe ahụ na -agakwa maka nzukọ anụ ahụ.
Na nzukọ anụ ahụ, '' ndị na -abịarute n'oge '' na -anọdụ ala ma jiri mkpịsị mkpịsị aka ha ma ọ bụ ihe edetu (ma ọ bụ ngwaọrụ) na -ejikọ onwe ha ka ha na -eche ka ndị ọzọ sonye.
Ndị otu nwere nzukọ anụ ahụ nwere ike nweta akara site na nzukọ ịntanetị ebe a na -ahapụ nkeji ole na ole maka ịmekọrịta tupu nzukọ amalite.
Nke a ga -agba mbọ hụ na ndị mmadụ na -ejide ihe ma jikọta onwe ha ebe ha na -eche ka ndị ọzọ sonye.
Belata ọnụ ọgụgụ nzukọ
Ebumnuche nke nzukọ bụ iji mee ka ndị mmadụ na -emelite n'okwu, tụgharịa uche na ha ma nwee ike ịme atụmatụ.
Agbanyeghị, ma e jiri ya tụnyere ọgbakọ ndị dịpụrụ adịpụ nke nwere ike ịnwe nzukọ ole na ole, nzukọ anụ ahụ na -adịkarị karịa na, nwata! ha na -ewe oge dị ukwuu?
Ebe ọ bụ na ha na -ewe nnukwu oge, ekwesịrị ịtụle oge nzukọ anụ ahụ ka ndị mmadụ ghara ịkwụsị iji oge na -arụpụta ihe na nzukọ.
Ngabiga? Ka onye nke ọzọ kwuo okwu
Enwere oge mgbe otu onye malitere ikwu okwu na onye nke ọzọ na -eme n'otu oge n'ihi ụgbụ netwọkụ, mgbe ahụ ọ na -abịa nkwụsị nkwụsị ahụ dị egwu site n'akụkụ abụọ mgbe ha ghọtara ọnọdụ ahụ.
Ihe na -emezi bụ na otu n'ime ndị na -ekwu okwu ji nkwanye ùgwù rịọ onye nke ọzọ ka ọ gaa n'ihu ka ha na -eche oge ha ikwu okwu.
Nke a na-eme na nzukọ onwe onye (naanị na nke a, ndị mmadụ na-akparịta ụka.
Ịnabata usoro ịntanetị nke ime mgbanwe site n'ịjụ otu onye ka o buru ụzọ kwuo okwu tupu ikwe ka onye ọzọ kwuo okwu na -eme ka onye ọ bụla nwee ohere ịha nhata ikwu okwu nakwa na enweghị isi ihe ọ bụla ahapụ na nzukọ.
Ọtụtụ ọrụ? Yay!
Ọ bụ eziokwu amaara ama na ụfọdụ nzukọ anaghị achọ nlebara anya nke ọma n'ihi na agafere ozi n'oge ụfọdụ adịghị gị mkpa.
Na nzukọ ịntanetị, ị nwere ike ịrụ ọtụtụ ọrụ site na ịge ntị mgbe ị na -arụ ọrụ n'azụ.
Ndị otu nwere ike ịnabata usoro a site n'ikwe ka ndị ọrụ na -enweghị ihe jikọrọ ha na mkparịta ụka n'otu oge gee ntị mgbe ha na -arụ ọrụ na nzukọ.
Ikwenye ha ọtụtụ ọrụ na -ahụ na ọrụ ha anaghị achịkọta na njedebe ụbọchị.
Ọ chọrọ ntụkwasị obi ka ihe ndị a niile rụọ ọrụ.
Ịrụ ọrụ n'ime ime na -achọ ịdọ aka ná ntị na nraranye n'akụkụ onye ọrụ, ekwesịrị ijide n'aka na ndị were ọrụ na ịnabata ụfọdụ usoro ndị a na -anọghị n'ịntanetị agaghị egbochi nrụpụta ndị ọrụ.